मेगाको विशेष साधारण सभा पुन | गृहपृष्ठ
Home लगानी मेगाको विशेष साधारण सभा पुन
on: ८ मंसिर २०७४, शुक्रबार १२:५५ लगानी
मेगाको विशेष साधारण सभा पुन
मङ्सिर ८, काठमाडौं (अस) । मेगा बैङ्क नेपालले पुन विशेष साधारण सभा बोलाउने भएको छ । मेगाले यस अघि मङ्सिर ४ गते बोलाएको विशेष साधारण सभामा गणपूरक शेयर सदस्य उपस्थित नभएका कारण स्थगित सभा पुस ४ गतेका लागि पुन बोलाएको हो । सभामा छलफलका प्रस्ताव भने पुरानै तय भएको छ । सभामा मेगाले टुरिजमसँग १००ः९५ स्वाप रेसियो पारित गर्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछ । यस आधारमा टुरिजमको सय कित्ता शेयर हुने सदस्यले मेगाकोे ९५ कित्ता पाउनेछन् ।
साथै, उक्त सभाले मर्जर प्रकृयाका लागि नियमावली संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपरेको अवस्थामा त्यस सम्बन्धी पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि पेस हुनेछ । बैङ्कले कात्तिक १६ गतेसम्म कायम शेयरधनीले साधारण सभामा भाग लिन सक्ने जानकारी दिएको छ ।
उता, टुरिजमले भने मङ्सिर ६ गतेनै ७ औं वार्षिक साधारण सभामार्फत मेगासँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । २०७३ माघ ६ गते टुरिजम र मेगा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति भएपछि माघ ७ गतेदेखि दुवै बैङ्कको शेयर कारोबार रोक्का रहेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार मेगा बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ४ अर्ब ५८ करोड २३ लाख १३ हजार र टुरिजमको रू. २ अर्ब १ करोड ६ लाख २० हजार रहेको छ । सो समयमा मेगाले रू. ८ करोड ११ लाख ९२ हजार र टुरिजमले रू. ३ करोड ४२ लाख ५८ हजार नाफा आर्जन गरेका छन् ।
मेगाले भदौ २७ गतेदेखि कात्तिक १४ गतेसम्म २ करोड ९७ लाख ८५ हजार ३४ दशमलव ६३ कित्ता हकप्रद शेयर विक्री खुला गरेको थियो । हकप्रदपछि भने बैङ्कको चुक्तापूँजी रू. ७ अर्ब ५६ करोड ८ लाख १६ हजार पुग्नेछ ।
मेगा बैंक नेपाल : कम्पनी विश्लेषण (आइतवार, २३ मङ्सिर २०७५)
२३ मंसिर २०७५, आईतवार ०८:३८
मेगा बैङ्क : कम्पनी विश्लेषण (बिहीवार, १८ असोज २०७५)
१८ आश्विन २०७५, बिहीबार ०९:२६
मेगा बैङ्कको स्वतन्त्र सञ्चालकमा काफ्ले
१३ भाद्र २०७५, बुधबार १२:३४
मेगा बैङ्कले दिने भयो ९.४५ प्रतिशत बोनस
२६ पुष २०७४, बुधबार १२:२८